Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: Pesta sy fandripaham-bahoaka
INTY SY NDAY: Pesta sy fandripaham-bahoaka
Nahoraka sy nalaza ary naresaka indray tato anatin’ny herinandro izao ny- hoe “ahiana mbola hihanaka indray ato ho ato ny aretina pesta”. Dia indro fa efa nisy raim-pianakaviana matin’ny pesta tany Andramasina. Dia ahoana indray ny tohin’izany ?
Teto amin’ity gazety ity izahay tamin’ny taon-dasa, isan’ny voalohany nanambara ny trangan’aretina pesta namono olona avy any Toamasina ka nentina niakatra teto Antananarivo, notsaboina teny amin’ny Hôpitaly Miaramila eny Soavinandriana (Girard et Robic). Dia ireny niarahantsika nahita ireny ny tohiny satria nanao aretin-tsy notahiana ny fitondram-panjakana.
Amin’izao fotoana, tena ao anatin’ny vanim-potoana iroboroboan’ny pesta ny eto Madagasikara izao, mandrapahatongan’ny volana aprily any. Efa misy io ny matin’ny pesta nefa toa tsy re izay mba fepetra raisin’ny fitondram-panjakana. Toa revo any amin’ny fanomanana fifidianana sy ny fametrahana izao paika maloto hahatafapetraka hatrany an’i Hery Rajaonarimampianina eo amin’ny toerana maha-filohampierenena azy hatrany izao.
Heloka bevava eo anatrehan’ny tantara sy ny taranaka any aoriana ny vitan’ny fitondram-panjakana tamin’ny fanaovany ambanimaso tsy hita ny fitrangan’ny aretina pesta teto tamin’iny taon-dasa iny, ka sao tsy tokony hangatahana andro intsony ny fandraisantsika vahoaka fepetra amin’izao fitondrana mampijaly antsika izao e! Efa ny aintsika vahoaka mihitsy ange no afoy e! Inona izao no mahasamihafa ny fandripaham-bahoaka nataon-dRatsiraka tamin’ny 10 aogositra 1991 sy ny vitan-dRavalomanana tamin’ny fampitifirana vahoaka tamin’ny 7 febroary 2009 amin’ireny fahafatesan’olona ampolony maro vokatra ny aretina pesta tamin’ny taon-dasa ireny? Samy fahafatesana no vokany fa ny fomba nisehoan’ny fahafatesana no samihafa. Mbola azo sokajiana ho endri-pandripaham-bahoaka toy ny tamin’ny 10 aogositra 1991 sy 7 febroary 2009 na ny tamin’ny 13 May 1972 sy ny 1 aprily 1971 koa ny vokatry ny fampahantrana nateraky ny tsy fahaiza-mitantan’ny mpitondra nifandimby teto sy ny fanararataotam-pahefana nataon’izy ireny mbamin’ny tsikombakomba nifanaovany tamin’ny vahiny mpanani-bohitra mpandroba harena, ary ireo mpampanjana-bola iraisam-pirenena.
Ka raha famonoana vahoaka no endrika iombonan’izany rehetra izany sy izao mbola ho fihanahan’ny pesta izao, inona indray no handrasantsika vahoaka fa tsy avy dia mifanatona sy mifamondron-kery dia miara-miroso ho amin’ny fanavotana ny aina ao ambany vahohon’ny fahafatesana? Sa samy hiandry ho faty eto avokoa? Tsia kosa, hoy izahay e!
Nahoana no mifampiandry nary fa tsy avy dia mametraka lamina hiaraha-miatrika ny fahavalo iombonana?